हन्ता भाइरस: मुसा ले टोकेमा तुरन्तै चेक जाँच गरौँ | हन्ता भाइरस - Nepali Health Media
मुसा ले टोक्दा तुरन्तै ख्याल गरौँ – हन्ता भाइरस
मुसाले वा छुचुन्द्रा ले कहिले काँही हामीलाई टोक्न सक्छ । सुतेको समयमा वा कुनैपनी समयमा टोक्न सक्छ । मुसा वा छुचुन्द्रो ले टोके के गर्ने ? मुसाको टोकाई ले कस्तो समस्या बनाउछ भन्ने बारेमा विशेष जानकारी रहेको छ । कृपया अन्तिम सम्म पढेर पुरा बुझ्न सक्नु हुनेछ ।
मुसा वा छुचुन्द्रा ले टोक्दा यस्तो हुन्छ Rat-Bite Fever Symptoms
मुसाले वा छुचुन्द्रो ले मानिसलाई हत्तपत्त टोकी हाल्दैन तर पनि कहिले काँही कुनै कारण ले गर्दा मुसाले टोक्न सक्छ । हरेक मानिसको भोलीको दिन कसरी बित्छ ? कस्तो हुन्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन । नसोचेको कुनै जीवले टोकि दिन्छ र आत्तिनु पर्ने स्तिथि आउन सक्छ । मुसाको टोकाई पनि यस्तै नसोचेको, अफ्ट्यारो घट्नामा नै पर्ने गर्दछ । भनाई छ नी दसा बाजा बजाएर आउदैन । दसा लागेपछी अनेक हुन् सक्छ । मुसाले टोक्नेै आँट्दा बसेकै ठाँउमा आएर टोकिदिन्छ । जँगली मुसा ठुलो हुने गर्दछ ,घरमा हुने सानो टाइपको मुसा सानो मेडियम साइज का हुने गर्दछन । मुसाको पनी धेरै वटा प्रजाती छन र ति मुसामा हुने ब्याक्टेरिया भाइरसहरु पनि फरक-फरक किसिमको का रहेका हुन्छन । कुन मुसाले टोक्दा कस्ता भाइरसहरु सर्छन भन्ने बारेमा जानकारी बिस्तारै दिदै जानेछु कृपया पुरा पढ्दै जानुहोस ।
मुसा ले टोक्दा के हुन्छ ?
मुसाको दाँत लामो तिखो टाइपको हुन्छ । मुसालाई समस्या पर्यो भने मुसाले दाँत ले नै हमला गर्दछ । मुसाले टोक्यो भने हामीलाई इन्फेक्सन हुन्छ । ज्वरो आँउछ । मुसाले टोकेपछी आउने ज्वरोलाई Rat bite fever भनिन्छ । मुसाको दाँतमा रहेको र्याल मा विभिन्न प्रकारको ब्याक्टेरियाहरु रहेका हुन्छन । जस्ले गर्दा मुसाले टोकेपछि हामिलाई उक्त र्यालबाट इन्फेक्सन र टिटनास हुन्छ । मुसाको प्रकार र व्याकेटेरिया को प्रकार अनुसार लक्षणहरु फरक फरक देखिन्छन । मुसा वा छुचुन्द्रो ले टोकेपछी रातो हुने,रगत बग्ने र दुख्ने वा सामान्य पोल्ने गर्दछ । यदि मुसा वा छुचुन्द्रो ले नै टोकेको हो भने ज्वरो आँउछ । Leptospirosis , typhus र plague जस्ता सङ्क्रमण हुने गर्दछ । यस्ता रोगका ब्याटेरियाहरु बिरालो, जनावर, कुकुर, मुसा, छुचुन्द्रामा पाईन्छ ।मुसाले टोक्ने बितिकै डाक्टर कोमा गईहाल्नुहोस । यदि उपचार गर्न ढिलो भयो भने अरु ठुलो समस्याहरु जस्तै मस्तिस्क को समस्या, निमोनिया को समस्या, हेपाटाइटिस र मेनेन्जाइटिस जस्ता समस्याहरु निम्तिन्छ । मुसा वा छुचुन्द्रो ले टोक्दा अझै ठुलो समस्या बनाउने सम्भावना हुने भएकाले तुरुन्तै डाक्टरको मा गईहाल्नुपर्दछ ।
कस्ता मुसामा कस्ता भाइरस हुन्छन ?
घरमा हुने मुसा मा Lymphocytic choriomeningitis भन्ने virus हुन्छ । यदि घरमा हुने मुसाले टोकेमा यस्ता भाइरस हरु हाम्रो शरीरमा प्रवेस गर्दछ । र पहिलो चरणमा टाउको दुख्ने,ज्वरो आउने,भोक नलाग्ने,जीउ दुख्ने जस्ता समस्या हुन्छन र दोस्रो चरण मा चाही मस्तिस्क सम्बन्धि मेनेन्जाइटिस,इन्सेफ्लाइटिस,जस्ता समस्या बँनाउछ ।
हन्ताभाइरस (Hantavirus) :
त्यसैगरी अर्को भाइरस छ हन्ताभाइरस । यो हन्ताभाइरस भनेको सेतो खुट्टा भएको मुसा बाट सर्ने गर्दछ । बिसेस गरी जँगली प्रजातिको मुसा रुखमा बस्ने,धान को कुनिउमा,परालमा बस्ने गर्दछ । घरमा बस्ने मुसामा पनि यो भाइरस हुन्छ । Rice rat,cotton rat,पनि भनिन्छ । यो टाइपको मुसामा हन्ता भाइरस पाइन्छ । यो टाइपको भाइरस सङ्क्रमण भएपछि ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने,जिउ दुख्ने,बमिट हुने,थकाई लाग्ने श्वासप्रस्वास सम्बन्धि समस्या बनाउने गर्दछ । यो हन्ताभाइरसको औषधी आज सम्म विज्ञान ले पत्ता लगाएको छैन । र हन्ता भाइरस लागि सकेपछी यसको पूर्ण उपचार सम्भव छैन । तर सुरुमै थाहा भयो यो भाइरस ले सक्रमण गरेको भने यसलाई रोकथाम विधि मार्फत उपचार गरिन्छ तर पूर्णरुपमा उपचार भने सम्भव हुदैन ।
टुलारेमिया भाइरस (Tularemia) :
त्यसैगरी अर्को छ टुलारेमिया भाइरस । यो रोग सङ्क्रमण गर्ने ब्याक्टेरिया bacterium francisella tularensis हो । यो भाइरस मुसा वा खरायो मा पाइने गर्दछ । मुसालाई वा खरायोलाई रगत चुस्ने झिँगा ले टोकेर मानिसलाई टोकेपछी सर्दछ । यसलाई Deer fly fever वा Rat bite fever वा rabbit fever पनि भनिन्छ । यो झिँगालाई डाँठ पनि भनिन्छ ।
मुसा वा छुचुन्द्रो को मल वा दिशा बाट पनी भाइरस ब्याक्टेरिया सङ्क्रमण हुन्छ । मुसाको मल मा वा पाचन तन्त्रमा साल्मोनेला भन्ने ब्याक्टेरिया पाइन्छ । मुसाको मललाई लिँड भन्ने गरिन्छ ।‌ मुसाको लिँडमा साल्मोनेला ब्याक्टेरिया पाइने भएकाले गर्दा मुसाको लिँड खानामा वा पानीमा मिसिएको छ भने उक्त ब्याक्टेरिया हाम्रो शरिरमा प्रबेस गर्दछ र हामीलाई पखाला लगाउने,बमिट आउने, ज्वरो आउने जस्ता समस्या हुन्छ । त्यसैले लामो समय सम्म खुल्ला राखेको खानाहरु नखानुहोस् ।
मुसा वा छुचुन्द्राले टोक्दा देखिने लक्षणहरु :
मुसा वा छुचुन्द्राले टोकेमा प्रथम चरणमा यस्ता लक्षणहरु देखिने गर्छन ।
घाउ सुन्निने गर्छ ।
मुसाले टोकेको २ दिन पछीबाट ज्वरो आउने गर्दछ । जसलाई Rat bite fever / rabbit fever भनिन्छ ।
बमिटिङ हुन्छ ।
जोर्नी दुख्छ ।
माँसपेशी दुख्छ ।
मुसा वा छुचुन्द्राले टोक्दा डाक्टरको मा गइहाल्नुहोस । नपत्याउदा साना साना जीवहरुको शरिरमा विभिन्न किसिम का भाइरसहरु रहेका हुन्छन र हामिलाई ति भाइरस को संक्रमण हुने गर्दछ ।‌
Tags: #nepal #nepalihealth corona virus fever hantavirus in nepali Health tips in nepali maleria nepali health Nepali Health News Nepali Health tips rabbit rat bite rat bite fever rat bite fever in nepali घाउ सुन्निने छुचुन्द्रा जानकारी जान्नु जोर्नी दुख्छ टुलारेमिया भाइरस टोक्दा तपाई तोक्दा नेपाली नेपाली हेल्थ पखाला पर्ने बमिटिङ माँसपेशी दुख्छ मुसा मुसाले टोक्दा के हुन्छ ? मुसाले तोक्दा के हुन्छ यस्तो ले स्वास्थ्य जानकारी हंता भाइरस हन्ता भाइरस हुन्छ हेन्टाभाइरस
Previous हाम्रो आखाले कसरी काम गर्छ ? How your eyes work ?
Next ब्लड प्रेसर हाइ छ, नुन खानु कि नखानु ? के गर्नु उचित हुन्छ ? High Blood Pressure